Las Tablas de Daimiel waxaa haysa abaar daran | Saadaasha Shabakadda
Beerta Qaranka ee Tablas de Daimiel oo ku taal Ciudad Real waxaa soo weerartay abaar iyo biyo la’aan joogto ah oo ay sababeen isbeddelka cimilada. Heerkulka sare ee la diiwaan geliyey bilihii la soo dhaafey awgood, tirada biyaha uumiga ayaa kordha, sidaa darteed tirada biyaha ayaa yaraata.
Waa hore sanadkii afaraad ee qalalan in Beerta Qaranka ay dhibaato soo gaarto iyo kala duwanaanshaha noolaha ay taageerto iyo isu dheelitirka deegaanka. Maxaa dhacaya haddii abaaruhu sii socdaan?
1 Abaaraha ka jira Tablas de Daimiel
Abaaraha ka jira Tablas de Daimiel
Warbixin ayaa la sameeyay oo ka tarjumeysa in roob la'aanta ay sabab u tahay sanadkii afaraad ee qalalan ee gobolka Ciudad Real ay diiwaangashan tahay, oo leh 317,6 litir mitirkiiba oo laga soo ururiyey xarunta saadaasha hawada ee Daimiel, ayaa hoos u dhigtay biyo-gelinta beerta nasashada ee waddanka, taas oo joojisay biyo ay ka helaan wabiga Guadiana bartamihii bishii XNUMX-aad ee sannadkan.
Xaaladaha caadiga ah, baarkinka qaranku wuxuu xajiyaa 1.343 hektar oo dhul ah oo fatahaad ah. Maanta, waxay haysataa oo keliya 528 ha oo biyo ah. Tani waxay ku soo kordhisaa saameyn badan shimbiraha, kuwaas oo aan haysan meel ay ku nastaan ​​dariiqyadooda socdaalka. Sannadkan ugu badnaan 60 xuurtood oo madow ayaa laga diiwaangeliyey marinka soo guurista, 86 malqacadaha iyo joogitaanka badan ee ardeidae. Tani waxay ka dhigan tahay in jardiinada qaranku muhiimad weyn u leedahay noocyo badan oo shimbiro ah, oo ay saameyn ku yeelan karto biyo yaraanta.
Waxaa cadaatay in howsha daboolida ay socoto. Tani waxay dhacdaa iyada oo ay sabab u tahay burburka dhirta ee hadhay, taas oo ay weheliso nabaad-guurka cunnooyinka adag ee la hakiyay, waxaa lagu soo saaraa weelka qashinka ee jardiinada iyo waxay hoos u dhigayaan awooddooda ay ku kaydin karaan biyaha.
Kuwa mas'uulka ka ah baarkinka ayaa falanqeynaya culeyska badan ee nafaqooyinka ay duubtay faaruqintu. Tani waxay noqon kartaa mid taban, maaddaama ay soo saarto ur xun iyo calaacallo siiya dadka soo booqda sawir xun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Las Tablas de Daimiel waxaa haysta abaar daran